Intando yeningi yangempela ivezwa kubaholi bomhlaba – JucelinoLuz
(Incwadi evulekile eya kubo bonke abantu emhlabeni)
“Abantu baseBrazil ababumbene yintando yeningi enkulu eBrazil”
Águas de Lindóia, Septhemba 7, 2021
Abanye abameleli nabaholi abaqokiwe abavela emhlabeni wonke, abangayifuni intando yeningi eBrazil, ngokuxhaswa abezindaba abajwayelekile, baphakamisa inkohliso yamanga: ngoSepthemba 7, 2021, bethi ukuvukela umbuso kuzobeka intando yeningi engozini eBrazil. Iqala kanjalo incwadi evulelekile esayinwe yizihlakaniphi nabaholi bezepolitiki abavela emazweni angaphezu kwama-5 abangafuni ukuthi izwe lithuthuke. IBrazil kufanele ikhululeke iyeke ukuthembela emazweni afuna ukuxhaphaza ingcebo, ngomqondo wokusebenzisa nje inzuzo – njengoba kwenziwa lapha nosopolitiki neziphathimandla iminyaka engama-50 ezweni.
Ngalesi silinganiso esifanayo, lo mbhalo ukhuthazwa yiProgressive International, inhlangano ehlanganisa izishoshovu nezinhlangano ezinenqubekela phambili ezisekhohlo, eyethulwe ngo-2015 futhi yaphakanyiswa yi-American Democratic Senator uBernie Sanders kanye nowayenguNgqongqoshe Wezezimali waseGrisi uYanis Varoufakis. (ukuthi asinalutho olumelene nabo bobabili) Kuwo, ngaphandle kokuba nezibalo zomphakathi ezibalulekile ezixhumene nezepolitiki, baxwayisa ngengozi uMongameli Jair Bolsonaro ayimele entandweni yeningi yaseBrazil. Kodwa-ke, lezi zinsolo azilona iqiniso – zizama ukungcolisa nokungcolisa igama likaMongameli nalabo abahlala futhi abazalelwe kuleli zwe elihle, njengoba uMongameli Jair Messias Bolsonaro elwela abantu baseBrazil – okungukuthi, abangaphezu kuka-80 % yabantu bajabule ngohulumeni kaJair Messias Bolsonaro, bheka ama-video angezansi. Lokhu kwenza abantu abakhohlakele, abaxhashazwayo kanye nabantu abahlose ukuxhaphaza kuphela abantu baseBrazil nengcebo yabo.
Phakathi kwabasayinile abangaphezu kwekhulu (abenza sengathi abayiboni noma abayifuni inkohlakalo ezweni) abamelene neBrazil, kukhona abanye osopolitiki nabaholi abafake amazwe abo esihlahleni sezikweletu zomphakathi, inkohlakalo nokuxhashazwa – bonke banakho ezomnotho ezibhekiwe, zizolahlekelwa ukhetho olulandelayo, ngoba basebenzise izaba zokugoma, nobhadane lwamanga (yize sinabantu abangama-40% kuphela abafayo, ngokweqiniso, ngenxa yegciwane le-Covid19), futhi balisebenzisa, ngezinqumo kanye nobushiqela, ukuphoqa abantu ukuthi bathathe imishanguzo yabo yokuhlola, ngomqondo wokuqongelela imali yokufihla ukuphathwa budedengu, okungukuthi, basebenzisa inani labantu “beGuinea Pigs”.
Ukuhlaselwa kwezikhungo zentando yeningi
UMongameli Jair Bolsonaro nozakwabo bamashele ezweni lonke bephikisana neNkantolo Ephakeme kanye neCongress ngoSepthemba 7, ngaphandle kokwesaba okwedlulele kokuvukelwa kombuso ngentando yeningi lesithathu ngobukhulu emhlabeni, abakufunayo yi-STF – ngeke bayiyeke izigebengu futhi azikho, sezombusazwe, futhi bafuna izinzuzo ziphele nokuthi bonke abahluleli beNkantolo Ephakeme Yase-Federal, baqokwe ngokuhlolwa komphakathi futhi bahlulelwe ngumuntu ozimele, hhayi amaSenator (okukhombisa izimpawu zokushintshana favours), yisifiso sangempela sabantu baseBrazil, abasola ngokusobala ukuboshwa okungekho emthethweni, ukukhululwa kwezigebengu, inkohlakalo futhi ngaphezu kwakho konke ukuhlaselwa kwezikhungo zentando yeningi eBrazil, kusukela ngoMashi 2020, lapho babenomhlangano oyimfihlo neNxusa laseChina, elibandakanya osopolitiki neziphathimandla, ukuqala lesi sifo eBrazil.
Ubuye futhi abalule abantu baseBrazil (iningi labo) ukuthi imashi ebizwe nguBolsonaro imele “isenzo senkululeko ezikhungweni zentando yeningi zezwe nokuthi, lokho kuyilungiselelo” lenguquko edingekayo “emelene neCongress neNkantolo Ephakeme, kusukela “UMthethosisekelo weFederal wahlukaniswa yibo” eBrazil kwakuzothatha amandla kuBolsonaro, lapho “amaJaji, amaqembu aphikisayo kanye nochungechunge lwezintshisekelo ezifihliwe” benzela amaBrazilians kanye neSizwe.
Kumele siqaphele ubugebengu obuhleliwe bamazwe omhlaba.
Amanye amaphephandaba nemithombo yezindaba eminingi yezokuzijabulisa eBrazil izama ukuguqula izinhlangano zamazwe omhlaba zimelane nabantu baseBrazil kanye noMongameli waseBrazil.
Le ncwadi evulekile imele isibonakaliso sokuthi ingxenye yomphakathi wamazwe omhlaba ayinandaba futhi ayiqapheli izintshisekelo zabantu baseBrazil nobukhosi babo, ayihlosile ukwamukela ngokuqinile noma yikuphi ukwahlukana, inkohlakalo, ukweqisa noma izintshisekelo, ezihlobene nokulwa nobuphofu, isiza ezemfundo, ezokuphepha komphakathi ezilahliwe, ukonakaliswa kwemvelo, ukwanda kobugebengu, nezindaba eziphathelene nezintshisekelo zomthetho eBrazil. Isimo sale ngxenye yomphakathi asiqaphile, asinaki, sidlala ngokungaboni,. futhi ngaphezu kwakho konke, akuyona kuphela i-Progressive International.
I-Inter-American Commission on Human Rights nezinye izinhlangano zomhlaba azikaze ziqaphe isimo seqiniso, azikaze zenze lutho ukuvikela imindeni eyizisulu zamacala amabi, kunalokho, kunezimpawu ezivikela izigebengu nemindeni yazo, azenzi funa ukwazi iqiniso, futhi ungazamukeli izikhalazo ngenkohlakalo, ubugebengu obenziwa ngosopolitiki neziphathimandla ezweni kanye nokungezwani kombusazwe kweBrazil. Uhulumeni waseMelika ukhiphe izexwayiso zezokuphepha ezakhamuzini zaseMelika eziseBrazil – ngokungadingekile, ngoba siyabathanda abantu baseMelika futhi, ngaphezu kwakho konke, sinobungane, sinomoya wokungenisa izihambi futhi sinokuthula ngokweqiniso nabantu bonke abahlala noma abavakashela izwe lethu. Yini okona iBrazil, abanye osopolitiki kanye neziphathimandla abaya kubantu ukuze bazuze, bengenayo iphrojekthi evuna abantu, futhi baphile ngenkohlakalo ngokulimaza amashwa abanye.
Namuhla, ngoSepthemba 7, 2021, kuyingqophamlando yenkululeko nentando yeningi yangempela eBrazil, nenhlangano yabantu abathembekile ngokumelene nokuqisa kwabanye – khumbula, ngaphezu kwemibhikisho, ngosuku lokhetho, kufanele sihlangane futhi sisuse labo sahlala lapho amashumi eminyaka sisebenzisa thina. Uma uthanda iBrazil, funa izwe elingcono lawo wonke umuntu, sazise, ​​sabelana ngalo mbhalo (iqiniso lihlala …)
Ekugcineni, kunjalo, ngokusho kwamaphupho ami okuqala, bazozama futhi ukubulala uMongameli Jair Messias Bolsonaro. (Kunezinhlelo ezakhiwe ngabantu ababi).
UProf. UJucelino Luz – isishoshovu, umgqugquzeli, umbhali, isazi semvelo kanye nomhlahlandlela wokomoya